ကွန်ပျူတာဂိမ်းအရံပစ္စည်းများ - MEETION
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ကွန်ပျူတာဂိမ်းအရံပစ္စည်းများ.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် MEETION.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် MEETION.
အဆိုပါထုတ်ကုန်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုရှိပါတယ်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံကို၎င်း၏တိကျသောအတိုင်းအတာနှင့်ပုံသဏ္ensureာန်ကိုသေချာနိုင်သည့် CNC စက်များအောက်တွင်လုပ်သည်။.
Non-Slop ရာဘာစတုရန်းစတုရန်းမောက် PAD P110
item အမှတ် :Mt-p110အမှတ်တံဆိပ်: Meetionအရောင်: အနက်ရောင်ရရှိနိုင်: စတော့ရှယ်ယာအတွက်OAN: 6970344431370ဖော်ပြချက် - ရေစိုခံရော်ဘာ Mouse pad
Unboxing-Mek80 RGB Backlit MKGB Backlit Morical Keyboard 丨 Mekion
Ultra -t ပါးလွှာချောကလက်အပြာရောင် switch စက်မှုကီးဘုတ် 20 mode ကို RGB ရောင်စုံ backlit ဂိမ်းနှင့် #office နှစ်ခုလုံးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှု။ အပြာရောင် switch သည် #mechanical Keyboard features များနှင့်အတူရိုးတံဖြစ်သည်။ အသံနှင့်လက်နှစ်မျိုးလုံးသည်အထူးအပျော်အပါးကိုရှာဖွေနိုင်သည်ဟုခံစားရသည်။ ဂိမ်းကစားရုံသာမကရုံးခန်းလည်းပါ။ Risp အသံနှင့်ရစ်သမ်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားနိုင်သည်။ ◆သော့ချက်များအပြည့်အဝဆန့်ကျင်ရေးဆန့်ကျင်ရေး, ◆ပြီးပြည့်စုံသောနောက်ခံအလင်း, သက်သောင့်သက်သာလက်ခံစားရ။ ◆ Multimedia Shortcut keys အုပ်စု 12 အုပ်စုများ, အသံ - အမြင်အာရုံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလွတ်လပ်စွာပြောင်းပါ, ဖျော်ဖြေရေးအတွက်သင်၏ဘ0ကိုပျော်မွေ့ပါ။ ►အိမ်တွင်းဖျော်ဖြေရေး, ရုံးသုံးခြင်း, ဂိမ်းသို့မဟုတ်ယှဉ်ပြိုင်မှု သင်လိုချင်တာကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။